#Adaamaa- Hidhamtooti Oromoo sababa siyaasaan hidhamni mirgi isaanii dhiibamaa jira – Kichuu
HomeNewsAfrica#Adaamaa- Hidhamtooti Oromoo sababa siyaasaan hidhamni mirgi isaanii dhiibamaa jira
Waliin dubbii koree teknikaa fi Birhaanuu Juulaa (madda keessoo irraa)
Koree Teknikaa: yoo xiqqaate Guyyoota 30 nuuf dabaluu qabdu waan bosanatti hafte tanneen guurree sinitti kennuuf.
Birhaanuu Juulaa fi aangaawota OPDO biraa: Guyyaa 30?? Guyyaa sodddooma fixxan keessatti maal nuuf gootan? Hin daballu. Waraanan ishii baleessina. Amma akka qurxummii bishaan keesaaa baatee ishii goona. Akka dur biyyi itti dheessitullee hin jiru. Hunda hoogganaan keenya firaa fi aantee godhateera.
Koree Teknikaa: Maal jarana kanuma sin beeknu mitii? Osoo sin tahee waraana 1000 mitii shanuu ni ajjeeftuu? WBO lama ajjeessutti namoota 50 haga 100 gabbaraa hin turree?? Nuti garuu Rasaasa tokko malee WBO 1000 harkatti siniif laannem.
WBO tasumayyuu qurxummii bishaan keessaa baate gochuu dandeessan; waraanan taanan uummatatu isaan waliin jira, odeeffannoo kennaaf isaan eenyuma caalayyuu mararfata. Kanaafuu guyyaa 30 kuni nu caalaa ykn ABO caalaa Isin fayyada bar.
Birhaanu: Akkamitti nu fayyada?
Koree Teknikaa: Isin kan Finfinnee jiru lafaan geessu, maal ammayyuu … maaltu hafe? Nutimmoo WBO dhaabichi dhaadatuun kanneen galchinaan hangasitti Jarri takaalamoodha. Sin sochii keessan itti fuftu. Kanaafuu guyyaa dabaluu keessan kan biraammoo uummata biratti akka mootummaan araara jaalattee araara kana milkeessuf hayyamamaa tahuu uummata hubachiifna. Kunis faayidaa keessan jechuudha. Kanaafuu tole jedhaati guyyaa kana dabalaa; waan feetanis akkuma Kanaan duraa itti fufaa hojii keessan….
Kunis araara jechuudha!
#Gujii__keessatti rakkoon hammaataan uummata Oromoorraan ga’aa jiru ammas daran jabaatee itti fufeera.
Dilbata dabre kibba Oromiyaa Gujii Bahaa Aanaa Oddoo Shaakkisoo Ganda Qorcaa Daalachaa iddoo addaa Ciittoo jedhamutti Waraanni Mootummaa Itoophiyaa nama nageyaa ijoollee horii tiksaa turte dabalatee nama torba (7) badii tokko malee rasaasaan fixan.
Duulli Oromoo hiyyoomsuuf karoorfamee Gujii keessaatti sirnaan hojjiirra oolaa jira. Waldaa IMX albuuda Qanxicaa baasu sa’aatii lama keessatti akka gad-dhiisanii bayan gochuun meeshaa uummataa 1,000 olii ibidaan guban.
Shaxii (lafa albuuda) ummanni baasee jireenna isaanii ittiin jijjiirachuuf carraaqu hundaa bifa wal-fakkaatuun cufanii ummannii magaala Shaakkisootti baqatee beelaan dhumaa jira.
Ummata Harargee fi Gujiitti walta bu’e jechuun qaamni mootummaa midhaanii fi mana jireennaa ummata kana lamaanii gubee akka baqatan gochaa ture.
Manni hidhaa Godinaalee Gujii lamaanuu guutee ummata guyyaa guyyaan gara Xollayii fe’aa jiran.
Doqdoqqeen mana hidhaa mootummaa jirtu kuma hedduu, kan gubattee akkas. Qabeennaa kana karaa kamiin deebifatan? Qabeennaa mitii ummanni nageyaan bayee galuu hin dandeenne. Lubbuun nama keennaa bilaashaan Waraana mootummaatiin badaa jirti.
Gaaga’amni kun hundi maqaa “ABO Gujii keessaa balleessina” jedhuun duula deemaa jirudha.
Maqaa ABO balleessuutiin mootummaan diina haluu Oromoorraa qabu Oromiyaatti naqee namaa fi qabeennaa uummataa balleessaa jira. Akka oduu achii argannetti akka godinaalee Gujii lamaaniittuu ummanni miidhamaa jira.
Mootummaan WBO soortan/nyaachiftan jedhaa RIB diina nama keenna fixaa ture ammas nutti ergee nu fixaa jira jedhu. Waanti nama gaddisiisaa RIB kun afaan namaatuu hin beeku jedhan.”